Main – Page 39 – The Zimbabwe Mail
Controversial businessman Wicknell Chivayo faces prosecution with the risk of doing time behind bars, after President Mnangagwa yesterday said the mistake made in awarding him the Gwanda solar project should not be repeated. The President […]
June 10, 2018 Staff Reporter 0
The MDC Alliance held a rally in Chiredzi today (10 June 2018) which was addressed by party leaders Nelson Chamisa and Tendai Biti. There was a big turn out of the party’s supporters at the […]
SERVING and retired soldiers were heavily involved in Zanu PF’s chaotic primary elections last month and some of the candidates that will represent the party in the July 30 harmonised elections were imposed by the […]
Movement for Democratic Change Alliance leader Nelson Chamisa says there is no way former First Lady Grace Mugabe can become his deputy. “Whoever wants to join us is welcome, our bus doesn’t get full but […]
Although more Zimbabweans trust President Emmerson Mnangagwa more than Movement for Democratic Change leader Nelson Chamisa six out of 10 said the country was going in the wrong direction. This cut across both rural and […]
June 9, 2018 Staff Reporter 0
HAHARE – President Emmerson Mnangagwa has launched a campaign pledge card and called on Zimbabweans to hold him accountable for his promises. Releasing the pledge card, the President who is the Zanu PF presidential candidate […]
MDC Alliance spokesperson Welshman Ncube has denied plans to join forces with former President Robert Mugabe and the National Patriotic Front (NPF) in attempts to unseat incumbent leader Emmerson Mnangagwa in the July 30 elections. […]
Grace Taking Over As NPF Leader Would Be An Unmitigated Disaster: Jonathan Moyo
Exiled former cabinet minister and G40 Faction kingpin Professor Jonathan Moyo has said that if former first lady Grace Mugabe takes over the opposition National Patriotic Front (NPF) it would be an unmitigated disaster. This […]
WASHINGTON — A pre-election survey in Zimbabwe has revealed that no political party will win a majority vote. According to a survey conducted by the Mass Public Opinion Institute (MPOI) in collaboration with Afrobarometer, ZANU PF […]
Updates by Wadzanai Mhombera, Pictures by Rodrick Mashingaidze 1300: Our live updates have come to an end. Thank you. 1259: Urges Zimbabweans to go and vote for real change on 30 July and declares the […]